၂၀၁၈ Super Bowl Commercial တွေထဲက အကောင်းဆုံး ကြော်ငြာ ၁၀ ခု - MoviesFan
၂၀၁၈ Super Bowl Commercial တွေထဲက အကောင်းဆုံး ကြော်ငြာ ၁၀ ခု
Super Bowl Commercial တွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး ကြော်ငြာတွေလို့ဆိုလိုက်ရင် လွန်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ကြည့်ရှုသူအင်မတန်များတဲ့ Super Bowl အစီစဉ်မှာ ကြေငြာထည့်ခွင့်ရဖို့က အင်မတန်စျေးကြီးပါတယ်.. ပုံမှန်စျေးအရဆိုရင် စက္ကန့် ၃၀ စာ ကြော်ငြာအတွက် ဒေါ်လာ ၅ သန်းခန့်ကျသင့်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကုမ္ပဏီပေါင်းစုံက Marketing အဖွဲ့တွေက သူတို့ရဲ့ Super Bowl Commercial တွေကို အမှန်အကန်လက်စွမ်းပြပြီး ဖန်တီးလေ့ရှိကြပါတယ်။
ရလဒ်ကတော့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာပါပဲ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ concept တွေနဲ့ အလန်းစားဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားကြတာမို့ Super Bowl ပွဲကိုမကြည့်ပဲ ကြော်ငြာတွေကိုပဲ သီးသန့်ကြည့်တဲ့သူတွေတောင်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တွေလို အမေရိကန်နိုင်ငံပြင်ပမှာ နေထိုင်သူတွေကလည်း Super Bowl ပွဲစတင်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီကြော်ငြာတွေကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ အသည်းအသန်လိုက်လံရှာဖွေကြည့်ရှုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်နဲ့ဝါသနာတူ Super Bowl Commercial ချစ်သူတွေအတွက် ဝေးဝေးလံလံလိုက်မရှာရအောင် ဒီနှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Super Bowl Commercial ၁၀ ခုကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Super Bowl Commercial နဲ့မရင်းနှီးသူတွေကိုလည်း တစ်ခုနှစ်ခုလောက် စမ်းသပ်ကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ကြပါလို့.. အရသာသိသွားရင် စွဲသွားပြီး အရင်နှစ်ကကြော်ငြာတွေကိုပါ လိုက်လံရှာဖွေကြည့်ရှုချင်စိတ်တွေပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဖော်ပြပေးထားရာမှာ Ranking အလိုက်စီထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ ကြိုပြောထားချင်ပါတယ်။
Budweiser ကတော့ သူ့ရဲ့ကြော်ငြာကို ကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ရင်ထဲကို ကြည်နှုးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှုက်သွားအောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ညကြီးသန်းခေါင် Budweiser စက်ရုံကအလုပ်သမားတွေက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ထားရတဲ့ ဒေသတွေဆီ ရေတွေလှုဒါန်းဖို့ပြင်ဆင်နေပုံကို Ben E. King ရဲ့ “Stand By Me” သီချင်းလေးနဲ့တွဲဖက်ဖော်ပြထားတာက အမှန်အကန်လန်းလွန်းပါတယ်။ Budweiser ရဲ့အဆိုအရဆိုရင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဒီလိုမျိုးရေတွေလှူဒါန်းလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် ရေဘူးပေါင်း ၇၉ သန်းကျော်ရှိသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး philanthrophy concept နဲ့ကြော်ငြာဖန်တီးခဲ့တဲ့ Budweiser ကိုတော့ ‘Kudos’ လို့ပြောရုံမှတစ်ပါး အခြားမရှိပါဘူး။
Amazon ကတော့ သူ့ရဲ့ စက္ကန့် ၉၀ စာကြော်ငြာကို Gordon Ramsey, Cardi B, Rebel Wilson နဲ့ Anthony Hopkins စတဲ့ စူပါစတားတွေနဲ့ဖြည့်ပြီး အလန်းစားဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ တကယ်လို့ Alexa ရဲ့အသံပျောက်သွားခဲ့ရင် လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဒီကြော်ငြာထဲမှာ Alexa မရှိတော့တဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာ ဗြောင်းဆန်ကုန်တယ်ဆိုတာကို ဟာသနှောပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ.. Amazon ရဲ့ Alexa ကြော်ငြာဟာ ဒီနှစ် Super Bowl ရဲ့အကောင်းဆုံးကြော်ငြာတစ်ခုဆိုတာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။
Pringles က ကျွန်တော်အတွက်တော့ Best Movie Snack ပါ။ စားလာတာလည်း နှစ်မနည်းတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကြော်ငြာမကြည့်မိခင်အထိ အရသာမတူတဲ့ Pringles တွေကို အတူတွဲစားပြီး အရသာအသစ်တွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာ စဉ်းကိုမစဉ်းစားမိခဲ့ပါဘူး။ Just “WoW”…
ပထမဗီဒီယိုထဲမှာ Guardians of the Galaxy ထဲကမင်းသား Christ Pratt ကို Michelob Ultra ကြော်ငြာမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ အမှန်အကန်ကြိုးစားနေပုံကိုမြင်ရမှာပါ။ ဒုတိယဗီဒီယိုထဲမှာတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ဘီယာချစ်သူတွေရဲ့ သူတို့ဘီယာနှစ်သက်ကြောင်း ဖော်ကြူးထားတဲ့သီချင်းကို သံပြိုင်သီဆိုကြတာကို နားဆင်ကြရမှာပါ။ Michelob Ultra ရဲ့ကြော်ငြာတွေကို Christ Pratt ရဲ့ charm က carry သွားတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်.. Chrit Pratt ချစ်သူတွေကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ.. ဘီယာပြေးသောက်ချင်စိတ်ပါပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။
Peter Dinklage နဲ့ Morgan Freeman တို့ရဲ့ Rap Battle!?? Hell yeah.. အဲဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တင် ဒီကြော်ငြာက ဒီနှစ် Super Bowl ရဲ့အကောင်းဆုံးကြော်ငြာစာရင်းဝင်သွားပါပြီ။ Peter Dinklage က Busta Rhymes ရဲ့သီချင်း၊ Morgan Freeman က Missy Elliott ရဲ့သီချင်းတို့နဲ့ Rap Battle ခင်းနေကြတာက မကြိုက်စရာအကြောင်းကိုမရှိတာပါ။
Game of Thrones ဆန်ဆန် ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ ဒီ Bud Light ကြော်ငြာကတော့ အမှန်အကန်ကိုလန်းလွန်းပါတယ်။ တိုက်ပွဲအမှန်အကန်ဖြစ်နေတဲ့ကြား Bud Knight က ခန့်ခန့်ငြားငြားရောက်ချလာပြီး သူ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သွားပါလေရဲ့။ Catchy ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေ၊ သင့်ကိုတခွီခွီဖြစ်စေမယ့် ဟာသတွေ.. ပြီးတော့ နဂါးတွေ.. ဒီလိုကြော်ငြာမျိုးမှလန်းတယ်မခေါ်ရင် ဘယ်ဟာကိုသွားခေါ်ရမှာတုန်း။ 10/10 ပါပဲ !
“Solo: A Star Wars Story” (Teaser)
ကြော်ငြာရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ရဲ့အမျှော်လင့်ခံရဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုရဲ့ Teaser ပါ။ Disney ကတော့ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရွေးပြီး မေလ ၂၅ ရက်နေ့ထွက်ရှိမယ့် Solo: A Star Wars Story ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Teaser ကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါတယ်။ Millennium Falcon, Han Solo နဲ့ Chewbacca တို့ပါဝင်တဲ့ အဲဒီ Teaser ကတော့ Star Wars ချစ်သူတွေအတွက် perfect ပါပဲ။
Stranger Things ထဲကမင်းသား David Harbour ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီကြော်ငြာဟာ ဒီနှစ် Super Bowl ရဲ့ “Most Clever Ads” လို့တောင်ပြောရမှာပါ။ Sterotypical ကြော်ငြာ idea တွေကို ပြောင်လှောင်ပြီး သူတို့ရဲ့ဆပ်ပြာကိုကြော်ငြာသွားပုံလေးက အင်မတန်ပဲထိမိလှတာမို့ ခွီချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကြော်ငြာကိုသာကြည့်လိုက်ပါ။
Toyota ကတော့ သူတို့ရဲ့ Super Bowl ကြော်ငြာကို ထုံးစံအတိုင်း လမ်းပေါ်မှာကားမောင်းနေတာကို မရိုက်ပြပဲ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ပြောပြထားပါတယ်။ ကနေဒါလူမျိုး နှင်းလျှောစီးအားကစားသမား Lauren Woolstencroft ဟာ မွေးဖွားလာစဉ်ကတည်းက ခြေလက်တွေမပါဝင်လာသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အားမလျှော့ပဲ သူမဝါသနာပါရာကိုကြိုးစားတာ မသန်စွမ်းသူများအိုလံပစ်မှာ ရွှေတံဆိပ်ဆု ၈ ဆုတိတိရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြော်ငြာမှာ သူမရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကို အားတက်ဖွယ်ရာ၊ စိတ်ကြည်နူးဖွယ်ရာ ဖော်ပြထားတာကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။ ကြော်ငြာဆိုတာ ရယ်စရာကောင်းမှ ကောင်းတယ်ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး.. သူပေးချင်တဲ့ message ကောင်းရင်လည်း ကြော်ငြာကောင်းဖြစ်တာပါပဲ။
ကိုယ်တွေကတော့ M&M ချောကလက်အလုံးလေးတွေဆိုရင် ဝါးလို့ကောင်းတော့ အမှန်အကန်ကိုကြိတ်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ အမြဲတမ်း စားမယ်ဝါးမယ်လို့ ကြိမ်းဝါးခံနေရတဲ့ ချောကလက်လုံးလေးတွေဖက်က ဘယ်လိုခံစားရမလဲ.. အဲဒါကိုတော့ လူအသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ M&M ရဲ့ mascot “Red” က ဒီကြော်ငြာကနေတစ်ဆင့် သူ့ခံစားချက်ကို ရင်ဖွင့်ပြသွားမှာပါ။
Previous Post: Anime ချစ်သူတွေ ချမ်းသာတဲ့ Waifu တွေထဲက ဘယ်သူ့ကို လက်အထပ်ချင်ဆုံးလဲ
Next Post: ‘Mission’ Impossible – Fallout’ ရဲ့ ပထမဆုံး Trailer ထွက်ပြီ